Ndị na-emepụta ihe na ndị na-ebupute Geophone - China Geophone String Factory
B usoro geophone nwere obosara uzo di iche iche na uzo di elu. A na-achịkwa ndidi niile n'ime 5%. Ọdịdị eriri igwe abụọ pụrụ iche nke na-eme ka mgbagha dị ala. Akụkụ: Ezigbo nkwụsi ike Ngosiputa ziri ezi na akara ngosi mgbapụta ngwaahịa nkọwapụta: Parameter \_ Mode YB-A003 (20 Natural) Natural Frequency (Hz) 100 ± 5% Coil Resistance (Ω) 1084 ± 5% Sensitivity (V / m / s) 39 5% Sensitivity With Shunt Resistor (V / m / s) —- Na-ekpuchi 0.42 ± 5% Damping Wit ...
5 Hz Low Freqnecy High Sensitivity Geophone 1.5 afọ Akwụkwọ ikike YB-A032
PS-5R bu geophone ohuru nke gosipụtara nnukwu uche na obere ihe okike. Mmetụta dị ka usoro geophones. Atụmatụ: Obere Freqnecy: 5 Hz Nnukwu uche ma e jiri ya tụnyere geophone ọdịnala: 83V / m / s Ọ dị mfe ma dị mfe idokwa nkọwapụta Ngwaahịa: Parameter / mode PS-5R (20 ℃) ​​Natural Frequency (Hz) 5 ± 10% Coil Resistance ( ) 2950 ± 5% Mmetụta (V / m / s) 83 ± 8% Damping 0.7 ± 10% Spurious Frequency (Hz) -120 Distortion (%) ≤0.2 Max.Motion (mm) 2.54 N'ịga Ma ...